थाइरोइडबारे जानकारी – eratokhabar
डा.अंशुमाली जोशीलेखकका सबै लेख-रचना हेर्नुस्
ई-रातो खबर २०७४, २८ असोज शनिबार १२:१० October 14, 2017 1695 Views
(क) थाइरोइड ग्रन्थी यो ग्रन्थी घाँटीमा रुद्रघन्टीको तल हुन्छ । यसले दुईओटा हर्मोन त्घ र त्द्ध दिन्छ । थाइरोइड ग्रन्थीलाई अर्को ग्रन्थी पिट्युटरी ९एष्तगष्तबचथ० ग्रन्थीले नियन्त्रण गर्दछ । पिट्युटरी ग्रन्थीले त्क्ज् नामक हर्मोन दिन्छ । जसले थाइरोइड ग्रन्थीलाई त्घ र त्द्ध निकाल्नलाई प्रेरित गर्दछ ।
(ख) थाइरोइड रोग ३ किसिमका हुन्छन्
(१) थाइरोइड ग्रन्थीले कम काम गर्ने रोग ९ज्थउयतजथचयष्मष्कल०
(२) थाइरोइड ग्रन्थीले धेरै काम गर्ने ९ज्थउयतजथचयष्मष्कm०
(३) थाइरोइड ग्रन्थीको क्यान्सर ९त्जथचयष्म ऋबलअभच०
(ग) थाइरोइड ग्रन्थीले कम काम गर्ने रोग ९ज्थउयतजथचयष्मष्कm० यो रोगमा त्घ र त्द्ध कम हुन्छ र त्क्ज् बढ्दछ ।
(घ) रोगका लक्षणहरु जाडो धेरै महशुस हुन्छ । शरिर सुन्निन सक्छ ।
छाला खस्रो हुन्छ ।
काम गर्न जाँगर लाग्दैन ।।
कब्जियत हुनसक्छ ।
गलगाँड निस्कन सक्छ ।
तौल बढ्नु (केवल २–४ किलो महिनाबारी गडबड हुनु ।
निःसन्तान हुनु टन्सिल बढ्नु, टन्सिल दुख्ने थाइरोइड रोगको कारणले हुँदैन ।
(ङ) किन ९ज्थउयतजथचयष्मष्कm० को उपचार गर्ने ? मानकसिक तथा शारिरीक तन्दुृरुस्तीका लागि मुटु रोगबाट बच्नको लागि, जन्मने बच्चाको राम्रो स्वास्थ्यको लागि (बच्चाको दिमागको विकासको लागि थाइरोइड हर्मोन अपरिहार्य हुन्छ ।)
(च) ज्थउयतजथचयष्मष्कm को उपचार कसरी हुन्छ ? बाहिरबाट थाइरोइड हर्मोन ९त्जथचयहष्लभ० सेवन गर्नुपर्छ । यो शल्यक्रिया गर्नुपर्ने रोग होइन । औषधी सेवन गर्दा ३–६ महिनामा रगतको परीक्षण गर्नुपर्छ ।
(छ) थाइरोइड ग्रन्थीले धेरै काम गर्ने रोग ज्थउयतजथचयष्मष्कm यो रोगमा त्घ र त्द्ध बढ्छ र त्ज्क् कम हुन्छ ।
(ज) लक्षणहरु तौल कम हुँदै जानु गर्मी धेरै लाग्नु पसिना धेरै आउनु मुटु धेरै धक धक हुनु दिशा धेरै पटक लाग्नु हात गोडा काम्नु सास फुल्नु निद्रा नलाग्नु, बेचैनी धेरै हुनु गलगाँड निस्कनु आँखा ठूलो हुँदै जानु
(झ) ज्थउयतजथचयष्मष्कm कति कसिमका हुन्छन् ? मुख्य २ किसिमका हुन्छन् – (१) न्चबखभक मष्कभबकभ (२) त्जथचयष्मष्तष्क यी दुई विल्कुल फरक रोग हुन् र उपचार पनि फरक छन् । न्चबखभक मष्कभबकभ अलिकति फरक रोग हो भने त्जथचयष्मष्तष्क आफै निको हुने रोग हो ।
(झ) न्चबखभक मष्कभबकभ कसरी पत्ता लाग्छ ? रगतमा त्द्ध र त्ज्क् हर्मोन जाँच गरेमा ज्थउयतजथचयष्मष्कm पत्ता लाग्छ । यो अवस्थामा त्द्ध बढ्छ र त्ज्क् कम हुन्छ । तर न्चबखभक मष्कभबकभ नै हो भनेर यकिन साथ भन्नको लागि एक किसिमको टेष्ट त्जथचयष्म ग्उतबपभ क्अबल गर्नुपर्छ ।
(ञ) न्चबखभक मष्कभबकभ को उपचार कसरी हुन्छ ?
(१) औषधीबाट कम्तीमा पनि १२–१८ महिना औषधी खानुपर्ने हुन्छ । तर औ षधी बन्द गरेपछि ५०–६० मा फेरि यो रोग फर्किन्छ ।
(२) यदि गलगाँड ठूलो छ भने शल्यक्रियाबाट उपचार गर्न सकिन्छ ।
(३) च्बमष्यबअतष्खभ यिमष्लभ एक किसिमको औषधी हो । जसको सेवन गर्दा यो रोग पूर्णतया निमूल हुन्छ ।
(ट) थाइरोइड रोग कसरी लाग्छ ? थाइरोइड रोग खानपिनको गडबडीमा अथवा व्यायामको कमीले हुने रो ग होइन । बन्दा, काउली धेरै खाएर लाग्ने रोग पनि होइन । यो एक किसिमको ब्गतय(ष्mmगलभ रोग हो अर्थात् शरिरको प्रतिरोधात्मक शक्ति शरिरकै अंगप्रति लक्षित हुने अवस्था हो । त्जथचयष्मष्तष्क थाइरोइड ग्रन्थीको भाइरल इन्फेक्सनले हुन्छ ।
२०७४ असोज २८ गते साँझ ५ :५५ मा प्रकाशित
अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी भव्य रुपमा मनाइँदै
नागरिक समुहले अक्टोबर क्रान्ति शतबार्षिकी मनाउँने